Vanimpotoana Fiavian'ny Tompo (katolika) - Wikipedia
Vanimpotoana Fiavian'ny Tompo (katolika)
Ny hoe Fiaviana dia teny malagasy nandikana ny teny frantsay hoe Avent, izay mifototra amin’ny teny latinina Adventus izay midika hoe "fahatongavana", izany hoe fiavian’ny Mesia no dikany. Herinandro efatra mialoha ny fankalazana ny Fahaterahan'ny Mpamonjy ny Fiaviana. Ny Fiaviana dia fiomanana amin’ny fahatongavan’i Kristy voalohany, tahaka ny maha fiomanana amin’ny Paka ny karemy. Ho an’ny Eglizy manaraka ny tetiandro gregorianina, ny Fiaviana no manomboka ny taona litorjika vaovao. Raha aloha indrindra ny alahady voalohany amin’ny fiaviana dia 27 Novambra, ary raha tara indrindra kosa dia 3 Desambra, ary miafara amin’ny 24 Desambra. Volomparasy ny loko litorjika ampiasaina.
1 Tantaran’ny fankalazana ny Fiaviana
1.1 Fotoana niantombohan'ny fankalazana
1.2 Fotoana ankalazana ny Fiaviana sy ny fiheverana azy
1.3 Ny anarana ilazana ny Alahady tsirairay amin’ny Fiaviana
2 Fiaviana intelo miantoana:
3 Ireo olona telo lehibe manamarika ny Fiaviana :
3.1 I Izaia
3.2 i Md Joany
3.3 I Masina Maria
Tantaran’ny fankalazana ny Fiaviana[hanova | hanova ny fango]
Fotoana niantombohan'ny fankalazana[hanova | hanova ny fango]
Tany amin’ny taonjato fahadimy no nanombohana nanamarika ny fotoana Fiavian’ny Tompo; nandidy ny mpino tao amin’ny Diôsezin’i Tours i Perpet eveka, mba hifady hanina intelo isan-kerinandro, eo anelanelan’ny fetin’i Md Martin (11 Novambra) mandra-pahatongan’ny Noely. Io fifadian-kanina io no nampilahatra ny Fiaviana hitovy amin’ny Karemy: fotoana fiomanana amina vanimpotoana manan-danja. Saika tao amin’ny faritanim-piangonan’ny Diôsezin’i Tours ihany aloha no nanaovana izany hatramin’ny taonjato fahenina. Nisy kônsilim-paritra natao tany Mâcon tamin’ny 581, izay nandraisana io fomba fanao tao Tours io, ka nampiharina eran’i Frantsa. Noraisina koa ny fanapahan-kevitra fa ny fombam-pivavahana fanao amin’ny karemy no hampiharina amin’ny fankalazana ny Fiaviana.
Fotoana ankalazana ny Fiaviana sy ny fiheverana azy[hanova | hanova ny fango]
Maro no nahavita nifady hanina isan’andro mihitsy fa tsy nianina tamin’ny telo andro nofaritin’ny kônsilim-paritra tany Mâcon. Efa nilaza anefa i Grégoire le Grand tamin’ireo toriteniny fa efatra herinandro ny Fiaviana ary tsy misy fifadian-kanina. Tamin’ny andron’i Charlemagne tamin’ny taonjato fahasivy anefa dia hita amina asa soratra sasany fa efapolo andro ny Fiaviana. Tamin’ny taonjato faha-13 anefa dia tsy nasiana fifadian-kanina intsony ny Fiaviana. Ny mpino tena efa mandroso amin’ny fiainana maha kristianina no nifady hanina tamin’izany. Nakisaka nihatery kokoa anefa ny elanelam-potoana Fiaviana: hatreo amin’ny fetin’i Md André apôstôly mandra-pahatongan’ny Noely. Rehefa tonga Papa i Urbain V tamin’ny 1362 dia nandidy ireo olona manodidina azy, monina ao an-dapan’ny papa hifady karazan-kanina sasantsasany. Tamin’izay dia herinandro dimy tany Rôma no natao ho vanimpotoan’ny Fiaviana iomanana amin’ny Noely. Herinandro dimy no voalaza ao amin’ny bokim-pivavahana atao hoe Sacramentaire de saint Grégoire. Ho an’ny litorjia araka ny fomban’i Md Ambroazy any Milan kosa dia herinandro enina ny Fiaviana. Taonjato maro izay no nanombohan’ny Eglizy ny Fiaviana amin’ny Alahady fahefatra mialoha ny Noely. Tsy misy fifadian-kanina na fifadiana karazan-tsakafo sasantsasany amin’izany. Manahaka ny karemy ihany ny fomba fivavahana ary anaovana fibebahana sy somary fotoana tsy dia ifaliana ny Fiaviana. Voarara ny fankalazana fanambadiana kristianina mandritra ny Fiavian’ny Tompo mandra-pahatongan’ny Epifania. Voatazona tsy niova ny litorijian’ny Fiaviana, fa fanavaozana somary madinika ihany no nampidirin’ny kônsily Vatikanina II tamin’ny 1963, anavahana ny Fiaviana amin’ny Karemy. Ary isan’ny fanavaozan’ny Vatikanina II ihany koa ny fiheverana vaovao ny Fiaviana, tsy mijanona amin’ny fiomanana amin’ny fahateran’ny Tompo ihany fa fotoana fiandrasana sy fanantenana ny fiavian’i Kristy amim-boninahitra ihany koa.
Ny anarana ilazana ny Alahady tsirairay amin’ny Fiaviana[hanova | hanova ny fango]
Ireto no anarana ilazana ny Alahady tsirairay amin’ny Fiaviana :
Ny Alahady voalohany Levavi,
ny faharoa Populus Sion;
ny fahatelo Gaudete;
ny fahefatra Rorate.
Nalaina tamin'ireo Sasinkira fidirana isan'Alahady ireo fiantsoana samy hafa ireo. Manomboka amin’ny 17 Desambra dia misy ireo Sasinkira lehibe «O» mampiavaka ny Fiaviana, io no lazaina hoe Antiphonae majores. Tamin’ny taonjato faha-8 io fomba fanao io no nanomboka ary mbola mitohy mandraka ankehitriny.
Fiaviana intelo miantoana:[hanova | hanova ny fango]
Fiavian’i Kristy in-telo miantoana no ankalazaina amin’io vanimpotoana io: lasa, ankehitriny ary ho avy. Ankalazaina ny fiaviany voalohany tamin’ny nahaterahany tao Betilehema, ankalazaina koa ny fiavian’i Kristy ao am-pon’ny olona amin’ny fotoana rehetra, ankalazaina koa ny fiaviany amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty. Satria, tanteraka tamin’ny fahaterahan’i Mesia tao Betilehema tokoa ny fampanantenan’Andriamanitra voalazan’ny mpaminany ao amin’ny Testamenta Taloha. Ny Fiaviana koa dia fandraisana ny fisian’i Kristy eo anivon'ny mpino kristianina, ary fivelomana ny teniny, eo am-piandrasana sy fanantenana ny fiverenany amim-boninahitra.
Ho an’ny mpino kristianina, noho izany, ny Fiaviana dia fotoam-pibebahana, fiandrasana ary fanantenana. Ireo herinandro voalohany amin’ny Fiaviana, alohan’ny 17 desambra dia miantso ny mpino mba hiambina: tokony ho vonona lalandava amin’ny fiavian’i Kristy izay tsy misy mahalala na ny andro na ny ora. Manomboka eo amin’ny 17 desambra kosa, ny vakiteny dia mitantara ny razan’i Jesoa Kristy, ny filazana ny hahaterahan’i Jesoa, ny nahaterahany.
Ireo olona telo lehibe manamarika ny Fiaviana :[hanova | hanova ny fango]
Telo ireo vavolombelona lehibe amin’ny fiandrasana ny fiavian’ny Kristy: i Izaia mpaminany sy i Joany Batista ary i Masina Maria.
I Izaia[hanova | hanova ny fango]
I Izaia no mpaminany lehibe nitory ny fampanantenana ny fiavian’ny Mesia, izy no milaza ny fahaterahan’ilay Emanoela: Andriamanitra miara-monina amintsika olombelona. Ambarany fa Andriamanitra mihitsy no hidina hamonjy ny olona, ny olona rahateo miandrandra famonjena avy amin’Andriamanitra.
i Md Joany[hanova | hanova ny fango]
I Md Joany Batista kosa dia nilaza fa tena akaiky ny fahatongavan’ny Mesia hisehoany amin’ny olona. Nasainy mibebaka ny olona mba ho fiomanana amin’ny fandrasaisana ny fiaviany, ka nanao batemim-pibebahana izy rehefa avy nampianatra ny olona tamin’ny toriteny tany an’efitra. Mpialoha lalana ny Mpamonjy i Md Joany Batista. Rehefa tonga i Jesoa dia nasehony: "Indro ny Zanakondrin’Andriamanitra, izay manala ny fahotan’izao tontolo izao".
I Masina Maria[hanova | hanova ny fango]
I Masina Maria indray, nanaiky ho reny hiteraka an’i Kristy izy. Izy no famantarana ny fonenan’Andriamanitra eto amintsika olombelona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanimpotoana_Fiavian%27ny_Tompo_(katolika)&oldid=980720"
Voaova farany tamin'ny 5 Martsa 2020 amin'ny 18:50 ity pejy ity.